Ogaden News Agency (ONA) – Minneapolis- Cuqasha Somalida Ogadenya oo Shir Muhiim ah la Qatay Masuuliyinta JWXO ee Maraykanka Tagerayna Go,amadii Shirkii Golaha Dhexe.
Minneapolis- Cuqasha Somalida Ogadenya oo Shir Muhiim ah la Qatay Masuuliyinta JWXO ee Maraykanka Tagerayna Go,amadii Shirkii Golaha Dhexe.
Posted by ONA Admin	/ September 6, 2013
Shir aad u balaadhan oo ay soo agaasimiin jaaliyada somalida ogadenia ee gobolka minneasota ayaa maanta oo tariikhdu tahay 09-05-2013 ka qabsoomay magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis/St.paul.
Shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay dhamaan odayaasha,cuqaasha iyo wax garadka somaalida ogaadenia ee ku dhaqan gobolada galbeedka dhexe(midwest) ee Maraykanka kasoo lagu soo dhawaynayay masuuliyiinta jamhada wadaniga xoraynta ogadenia ee ka soo qayb gashay kalfadhigii 6aad ee Gollaha Dhexe ee JWXO. Shirkani wuxaa uu qayb kahaa shirar ay madaxda JWXO warbixin kusiinaysay ururada bulsha waynta somalida ogadenia, maamulka jaaliyada iyo kan OYSU.
Shirkan ayaa sida caadad Jwxo u ah waxaa lagu furay aayado quraan ah oo uu soo jeediyay iimaamka wayn Sheikh Ahmedwali Sayid oo qur’aanka kadib wacdi yar soo jeediyay una dardaarmay dhamaan ummada muslimiintuhu in ay midoobaan gaar ahaan shacabka somalida ogadenia in xilligan adag ay gacmaha isqabsadaan una midoobaan qadiyadooda.
Intaa kadib waxaa shirka furay Gudoomiya gobolka minneasota mudane Abdinnasir Xirsi Gaani oo aad u amaanay doorka odaayashu halganka ogadenia ee qori isu dhiibka ah kuleeyihiin iyo sida ay ka jaaliyad ahaan ugarab-taaganyihiin mar walba.
Intaa kadib cod baahiyaha waxaa la wareegay shir gudoonka shirka Mudane Mohamed Ahmed Dahir wuxuuna si nidaamsan usoo jeediyay hab usocodka shirka islamarkaana ku wareejiyay cod-baahiyaha, Mudane Mohamud Nur oo ah madaxa Haayada Cilmi Baadhista iyo Qorshaynta JWXO oo dhawaan ka soo laabtay kalfadhigii 6aad ee Gollaha Dhexe ee JWXO. Mudanaha oo si wayn loo sugayay ayaa bilaabay in uu cuqaasha reer ogadenia siiyo warbixin qodo dheer oo ku saabsan halganka somalida ogadenia, guddaha iyo dibadaba waxa uuna ku dheeraaday ka sheekaynta waxayaabihii usoo qabsoomay mudadii ay shirka ku jireen oo ahayd intii udhaxaysa 15-23/August/2013.
Sida mudanuhu sheegay kalfadhigan wuxuu kusoo beegmay, wakhti xaalada Geeska Africa guudahaan,dhibaatooyin badani kajiraan, gaar ahaana isagoo halganku duruufahaa adag la wadaaga gobolka. ay udheertahay, in gumaysiga Ethiopia shacbiga somalida ogadenia ula dhaqmayo, si binii-aadminimada kabaxsan. Ayadoo xaaladaa latix-galinayo ayuu mudanuhu sheegay in laga wada-hadlay arimo badan oo ay kamidyihiin, Ciidanka jwxo,Abaabulka, Diblomaasiyada iyo arimo kaloo fara badan. Cuqaasha ayaa aad ugu riyaqay warbixinta.
Waxaa isna warbixin soo jeediyay Mudane Ahmed Majeerteen oo ah kuxigeenka madaxa Haayada Cilmi Baadhista iyo Qorshaynta Jwxo ahna wakiilka Jwxo ee USA, oo mudanaha safarka ku wehelinayay kuna amaanay dareenka fiican ee ay cuqaashu mujinayaan.
sheegayna in looga baahanyahay bulshada somalida ogadenia ee maraykanka ku dhaqan in ay door lixaad leh ka qaatan xornimada ogadenia. tilmaamayna in ogadenia halkan laga haysto inagana la inaga sugayo saan arintaa wax uga qaban lahayn albaab walbana ugaraaci lahayn.
Baaq Tagero ah:
Warbixinta kadib cuqaashu waxay soo jeediyeen talobixino rasamaal u aha halganka xaqa ah ee ka socda Ogadenya waxayna si buxda u taageereen dhamaanba goamadii ka soo baxay kalfadhigii 6aad ee Gollaha Dhexe ee JWXO 2013.